Caymisyada Bariga Afrika oo ku baaqay in ay yeeshaan jaangooyooyin midaysan - Sabahionline.com
Caymisyada Bariga Afrika oo ku baaqay in ay yeeshaan jaangooyooyin midaysan Maarso 25, 2012
Jaangooyeyaasha caymisyada Bariga Afrka ayaa warbixin ay Baanka Adduunka u gudbiyeen ku sheegay in loo baahan yahay halbeeg midaysan oo jaangooyooyin ah si loo helo wada shaqayn gobol iyo ballaarin xudduudaha ka tallawda, The East African oo Kenya ka soo baxda ayaa Sabtidii (24-ka March) werisay. Qodobbo la xiriira
Lacagaha caymis ee lagu soo dallacay Westgate oo kor u dhaafay 10 bilyan oo shilin
Shilalka gaadiidka oo Tansaaniya ka khasaariya $1.2 bilyan
Golaha wasiirrada Kenya oo meel-mariyay qawaaniin adag oo la xiriira wadidda gaadiidka
Warbixinta oo uu qoray Xirrirka Maamulayaasha Caymisyada Bariga Afrika (East African Insurance Supervisors Association, EAISA) ayaa so jeediyey in la sameeyo hal guddi oo caymisyada maamula. "Sharciyada haatan jira ayaa qaali ka dhigaya in meherad caymis gobolka laga sameeyo,” ayuu yiri Tom Gichuhi, oo ah madaxa u sarreeya Xiriirka Caymisyada Kenya. "Ilaa uu suuqa lo dhan yahay si buuxda u shaqeeyo, caymisyada reer Kenya si buxda ugama faa’iidi doonaan fursadaha ka jira suuqyada Besha Bariga Afrika,” ayuu yiri. Haatan, caymisyada gobolka ayaa ku khasban in ay aasaasaan shirkado cusub meeshii ay laamo ka furan lahaayeen xudduudaha shishadooda, taa oo ballaarinta ka dhigaysa “amuur qaali ah”, ayuu yiri Gichuhi. Iswaafajinta shuruucda si loo dhimo qiimaha ku fididda xudduudaha gadaashooda ayaa kordhinaysa galaangalka caymisyada si heer gobol ah, iyadoo fursado u furaysa meheradaha Bariga Afrika, ayay ku warrantay jariidaddu. Ma jeclaysatay maqaalkan?